Ikhaya likaMaria - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguΚωνσταντινοσ
UΚωνσταντινοσ ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uΚωνσταντινοσ iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kwindawo emangalisayo yaseKastro eSifnos, kukho indlu encinci entle. "Ikhaya likaMaria" limi kwindawo ethuleyo yaseKastro, kufutshane nemarike encinci, iivenkile zekofu kunye neevenkile ezincinci zezipho!
Le ndawo yakhelwe entabeni enamatye kwaye inonxweme oluhle olunamatye ekuthiwa yi-Eftamartyros ngaphantsi kwayo kunye nolwandle olunamatye agangathiweyo kufutshane nase, ekuthiwa yiSeralia!
Izindlu zethu zikwiimitha eziyi-100 ukusuka kwindawo yokupaka kwaye zinesitrato esihle sesiqithi!
Le ndlu incinci kodwa inokuhlala abantu abadala abayi-4 okanye abantu abadala abayi-5 ukuba usondele nyhani!!
I-Kastro kuphela kwelali egciniweyo yembali eSifnos, ke akukho moto zivunyelweyo ngaphakathi!
Yilali encinci eyakhiwe kudonga olukhulu lwamatye njengeNqaba kwaye yiyo loo nto yathatha igama elithi Kastro, Inqaba! Unokuhambahamba kwaye ube nembono entle ukusuka kwiindawo eziphakamileyo ukuya eAegean kwaye ufumane iicawa ezininzi ezincinci ezizimele ngaphakathi kuyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Κωνσταντινοσ
Siyakwamkela xa ufika ibe sikumema nanini na kukho isiko eSifnos ukuze usibone.
Singakunika yonke inkcazelo ye "Sifnos Trails" kwaye ukuba ufuna isikhokelo.
Ngaphezu koko sinefama onokuyityelela uze udibane nezilwanyana, uqokelele imifuno neziqhamo (kunye neziqhamo eziphezulu!!) ibe qho ngeempelaveki sinesidlo saseSifnian Revytwagen (isuphu yeChickpeas) esiphekayo kwioveni ephandle.
Inombolo yomthetho: 00000075335